PRIVACY STATEMENT & GDPR KUNYANYA - shoppingdirect24.com - SD24
musha > KUNYANYA ZVAKATATIDZWA NEGDPR KUZIVA
- Tine chivimbo chekuti tinopindirana nezvose zvakakosha zvei
Tarisa hukama iyi kuti uwane mamwe mashoko pamusoro peGDPR:
- Hatishandisi data yako kunze kwekudiwa kuti uite bhizimisi newe
uye nekugadzirisa nzvimbo yedu yepamusoro kuti uwane zvakanakisisa zvekutenga.
- Hatitengesi data yako.
- Hatishandisi data yako yekutsvaga kana kukurudzira pasina ruzivo rwako rwakajeka.
- Takagadzirisa chitoro chedu kune:
" Usati uchengetedze zvizere IP mareta uye unonyora zvose IP mazita mumutambo.
Pamusana peGDPR yakagadziriswa, IP address inonyanya kushandiswa kune vose vashandisi. "
- Tinoshandisa statistical apps uye zvigadziriswa kuongorora mushanyi wevashanyi vezvitoro chete muzvikwata zvakagadzirwa. Kunyanya fadza cherechedza kuti hatinounganidza kana kuti tine ruzivo rwako rwemunhu, sezita, kero, nhamba yefoni kana email, kunze kweiyo inopiwa newe mumamiriro ekutenga kwako. Hatishandisi ruzivo rwakadaro rwemunhu chero rupi zvarwo zvinotarisirwa.
- Kuwanikwa kwechitatu kana kudhindwa kwemashoko ako kunongoitwa chete kana kupiwa pane zvinodiwa-kuziva-(zvichienderana nevatengesi vezvigadzirwa / vatengesi uye mapurogiramu ekubhadhara) uye chete nokuda kwekutendeseka kwebhizimisi newe, tapota ona zviri pasi apa.
Iyi Dare Rezvinyorwa inotsanangura kuti mashoko ako ega ega akaunganidzwa sei, anoshandiswa, uye akagoverwa paunoshanyira kana kutenga kutenga kubva kudividirect24.com ("Site").
Paunoshanyira Site, tinongotora zvimwe ruzivo pamusoro pekushandisa kwako, kusanganisira ruzivo pamusoro pebhundaneti yako, IP kero, nguva yenguva, nzvimbo uye mamwe makiki akaiswa pafoni yako. Uyezve, sezvo iwe uchitsvaga paIndaneti, tinounganidza ruzivo pamusoro pemapuraneti ega ega kana mazvigadzirwa zvaunofunga, zvipi mawebsite kana mazwi ekutsvaga akakuratidza iwe kuSiti, uye ruzivo pamusoro pekuti iwe unoshanda sei neSite. Isu tinotarisa kune izvi zvakangotorwa-zvakagadzirirwa mashoko se "Dhizivo Dhizha".
- "Mifananidzo yepaIndaneti" nhamba dzezviitiko zvinowanikwa paSite, uye shandisa deta kusanganisira IP address yako, nzvimbo yako, shanduro yepaIndaneti, mutevedzeri wepaIndaneti, kureva mapeji, uye matanho ezuva / nguva.
Sezvinorondedzerwa pamusoro apa, tinogona kushandisa Ruzivo Rwako Kuti tipe zviziviso zvakatarwa kana kutengeserana kwekutengesa isu tinotenda kungave kwakakunakira iwe. Kuti uwane mamwe ruzivo pamusoro pekutsvaga kwekutsvaga kushambadzira, unogona kushanyira pepa rekudhiridzira re Network Network Initiative ("NAI") pa http://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/how-does-it-work.
Takagadzirisa zvinyorwa zvesekodha zvekuunganidza zvidzidzo uye mapurogiramu ekuremekedza hausi kutevera zvikumbiro, sezvo nzvimbo yakadaro iripo.
Nokushandisa webhusaiti yedu, iwe (muenzi) unobvumiranazve kubvumirana kubvumira vanhu vatatu kuti vashandise IP yako, kuitira kuti vaone nzvimbo yako nekuda kwekushandiswa kwemari. Iwewo unobvumirana kuva nemari iyo yakagadzirirwa yakachengetwa muchikwata chekugovera mu browser yako (cookie yenguva iyo inobviswa zvachose kana wavhara musikana wako). Tinoita izvi kuitira kuti sarudzo yakasarudzwa isarambe yakasarudzwa uye isingagadziri paunenge uchitsvaga webhusaiti yedu kuitira kuti zvigaro zvigone kushandura kune (iwe mushanyi) mari yemunharaunda yako.
Kuti uwane mamwe ruzivo pamusoro pemitemo yedu yega yega, kana iwe une mimwe mibvunzo, kana iwe uchida kunyunyuta, tapota tibvunze nesu ne e-mail pa